“Heshiiska aan la galnay DP World wuxuu inoo furay in aan ka baxno Godkii aan ku jirnay, waanan ugaga” wasiirka ganacsiga | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“Heshiiska aan la galnay DP World wuxuu inoo furay in aan ka baxno Godkii aan ku jirnay, waanan ugaga” wasiirka ganacsiga
Hargaysa (SDWO): Shirweynaha maalgashiga aduunka ayaa todobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaaladda Dubai ee wadanka isutaga imaaraadka carabta, iyadoo shirkaasi ay ka qayb galeen wasiirro iyo masuuliyiin kale oo ka socday Somaliland.
Wasiirka horumarinta maalgashiga iyo wasiirka ganacsiga Somaliland oo dalka dib ugu soo laabtay, isla markaana maanta warbaahinta la hadlay kadib markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Hargaysa ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkaasi iyo waxyaabaha ay kala soo noqdeen.
Maxamed Axmed Cawad, wasiirka horumarinta maalgashiga oo arrimaha shirkaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Shirkan waxaa laga hadlaa waxa loo yaqaano ama loo soo gaabiyo AIM.
Waxaana lagu qabtaa magaaladda Dubai waxaana soo qaban qaabisa dawladda imaaraadka carabta. Shirkan sanad walba waa la qabtaa, waxaanay ahayd markii 8aad ee la qabto.
Sanadkan waxaa ku cusbaa anigoo Somaliland ah iyo wadanka Koonfurta Kuuriya”.